Neymar JR Oo U Muuqda Mid Aan Kooxba U Arag PSG & Talaabo Kale Oo Uu Qaaday Oo Bahdilaad Iyo Yasmo Ku Ah Kooxdan Ku Maal Beeshay - Gool24.Net
Garabka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar JR ayaa markale sameeyay dhacdo cadho galisay maamulka sarre ee kooxdiisa gaar ahaan tababaraha kooxda oo saxaafada u warramay kahor kulankooda ugu dambeeya ee horyaalka La Liga.
Kaddib markii uu ka qayb galay xafladii sanadka ee horyaalka France ee Arbacadii qabsoontay, Neymar JR ayaa toos diyaarad u raacay isaga oo tagay dalkiisa Brazil.
Neymar oo aan awoodin inuu ciyaaro kulanka ugu dambeeya ee kooxdiisa isla markaana ganaax qaba ayaa sababta bixitaankiisu uga cadhaysiiyay tababare Tuchel uu yahay inuu baxay ogolaansho la’aan oo uusan kooxda waxba u sheegin.
Tababare Tuchel oo saxaafada u warramaya ayaa sheegay inaysan kooxda iyo isagu wax fasax ah siin isaga oo ay wajigiisa ka muuqatay cadho saa’id ahi marka uu ka hadlayay arrimaha 27 jirkan.
Tababaraha ree Germany ayaa yidhi “Ma waxa fasaxday PSG? Maya, Anigu ma fasixin, Maaha in ciyaaraha waxaas lala sameeyo, Aniga ima qusayso inaan go’aamiyo haddii aan fasaxayo maqnaanshihiisa iyo haddii kale”
Neymar ayay calaamad su’aal weyni saarantahay mustaqbalkiisa kooxda waxaana intaas u dheer xushmad darro iyo dabeecad adag oo uu lasoo baxay tan iyo markii uu usoo wareegay Paris 2017-kii.
Xiddigan ayaa hore loogu eedeeyay inuu isagu tababaraha kooxda u sheego kulamada uu diyaarka u yahay inuu ciyaaro iyo kuwa uusan doonayn inuu ka qayb qaato wakhtigii Unai Emery.
Sidoo kale waxa batay ganaaxyada uu la kulmayo tan iyo markii uu u wareegay PSG iyadoo dhawaan laga wada ganaaxay kulamada gudaha dalka France iyo kuwa tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka dambe labadaba.